Ndị na-emepụta ngwaahịa & ndị na-eweta ngwaahịa - Ụlọ ọrụ ngwaahịa China
PIPE ígwè na-enweghị nkebi oyi dọtara
Igwe igwe anaghị agba nchara oyi (CDS) bụ igwe nchara oyi na-adọkpụrụ nke na-enye nnabata otu, arụ ọrụ arụ ọrụ yana ike na nnabata dịwanye elu ma e jiri ya tụnyere ngwaahịa akpọrepu ọkụ.
Ọgwụgwọ nke mkpanaka pneumatic pneumatic, oghere linear ziri ezi, mkpanaka chrome plated piston siri ike na mkpanaka chrome chrome, ogwe chrome siri ike: enwere ike ịnye ọgwụgwọ induction siri ike, menyụọ na iwe ọkụ ma ọ bụrụ na achọrọ ya.
Igwe mmiri hydraulic
Honed Tube a maara nke ọma dị ka hydraulic cylinder tube na ụlọ ọrụ.Tubes Honed, Skived & Roller Burnished Tubes bụ ihe kachasị mkpa nke imepụta cylinders hydraulic.
Ngwunye eriri na nka teknụzụ nke igwe anaghị agba nchara.
Teknụzụ eriri: Ọ dị mma ijikọ ọkpọkọ igwe karịa 2pcs.Teknụzụ ịkụ ihe: Ejiri ya na injin mmanụ ala, Geological Engineering, Drainage Engineering, wdg.
AKWỤKWỌ NDỊ NA-ECHICHE Ọkụ na-acha uhie uhie na-acha uhie uhie na-enweghị ntụpọ.
Ọdụdọ enweghị nkebi maka PTO Shaft.
Anyị bụ otu n'ime ndị na-ebubata tube nke Triangular tube / lemon tube maka imepụta ogwe PTO maka rotavator wdg.
Lemọn Steel tube
Okwu mmeghe nke ngwaahịa: Triangular lemon tube, triangular tube, lemon tube.○ Ịkwụ ọtọ dị mma.○ A na-eji ngwa ọrụ ugbo, igwe ụgbọ ala PTO na mpaghara ndị ọzọ.○ Agricultural ígwè PTO aro, triangle ígwè anwụrụ.
ọkpọkọ pụrụ iche bụ ụdị ọkpọkọ nchara na-enweghị ntụpọ nke eserese oyi mere.The pụrụ iche ekara enweghị nkebi ígwè ọkpọkọ bụ n'ozuzu okwu nke enweghị nkebi ígwè ọkpọkọ na ndị ọzọ cross-ngalaba shapes ma e wezụga gburugburu ọkpọkọ.
Galvanized enweghị nkebi ígwè ọkpọkọ na-ekpo ọkụ-mikpu galvanized, otú ego nke zinc plating dị nnọọ elu, nkezi ọkpụrụkpụ nke zinc mkpuchi bụ ihe karịrị 65 microns, ya corrosion iguzogide dị nnọọ iche na nke na-ekpo ọkụ-mikpu galvanized ọkpọkọ.Onye na-emepụta ọkpọkọ galvanized mgbe niile nwere ike iji ọkpọkọ galvanized oyi dị ka mmiri na ọkpọkọ gas.The zinc mkpuchi nke oyi galvanized ígwè ọkpọkọ bụ electroplated oyi akwa, na zinc oyi akwa kewapụrụ na ígwè ọkpọkọ mkpụrụ.Ihe oyi akwa zinc bụ t ...
Enwere ike kewaa usoro mmepụta na mmepụta nke mgbidi dị arọ nke igwe anaghị agba nchara na ịbịaru oyi, ntụgharị oyi, ntụgharị ọkụ na mgbasawanye ọkụ.Ihe nke ọkpọkọ ígwè bụ 10, 20, 35 na 45, nke a na-akpọ ọkpọkọ ígwè nkịtị.Dị ka ngwa, ọ nwere ike kewaa structural enweghị nkebi ígwè ọkpọkọ, enweghị nkebi ígwè ọkpọkọ maka njem, enweghị nkebi ọkpọkọ maka ji esi mmiri ọkụ, elu-nrụgide enweghị nkebi ígwè ọkpọkọ maka ji esi mmiri ọkụ, elu-nrụgide enweghị nkebi ígwè ọkpọkọ maka chemical fert ...
A na-eji ya eme ihe iji rụpụta ezigbo carbon structural steel na alloy structural steel ọkpọkọ maka ọkpọkọ mmiri ọkụ uzuoku nwere nrụgide dị elu na n'elu.
Ọgwụgwọ okpomọkụ na-ezo aka na usoro ọgwụgwọ okpomọkụ okpukpu abụọ nke imenyụ na okpomọkụ dị elu.Nzube ya bụ ime ka workpiece nwere ezi keukwu n'ibu Njirimara.Igwe ọkụ dị elu na-ezo aka na ọkụ na 500-650 ℃.
Ọgwụgwọ okpomọkụ na-ezo aka na usoro ọgwụgwọ okpomọkụ okpukpu abụọ nke imenyụ na okpomọkụ dị elu.Nzube ya bụ ime ka workpiece nwere ezi keukwu n'ibu Njirimara.
Hydraulic cylinder enweghị nkebi ígwè ọkpọkọ kwesịrị ekwesị maka mmanụ, hydraulic cylinder, n'ibu nhazi, oké mgbidi pipeline, chemical ụlọ ọrụ, ọkụ eletrik, ji esi mmiri ọkụ ụlọ ọrụ, elu okpomọkụ, ala okpomọkụ na corrosion eguzogide enweghị nkebi ígwè ọkpọkọ, na ọ dabara maka mmanụ ala, ụgbọ elu.
API bụ mbiri nke American Petroleum Institute.Ọ bụ ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ mmanụ Amerịka nke na-enye data dị mkpa kwa izu maka oriri mmanụ America na ọkwa ngwa ahịa.
Nhazi ọkpọkọ igwe
Oghere ntụtụ bụ ụdị ihe nkedo ahaziri ahazi, nke enwere ike idozi ma jikọta ya, ma ọ bụ nwee ike ịkwaga n'akụkụ akụkụ ahụ ejikọrọ.A na-ejikarị ya eme ihe maka nkwonkwo hinge nke akụkụ abụọ iji mepụta njikọ hinge.A na-ejikarị eriri pin na-ejikọta ya na ntụtụ nkewa, nke a pụrụ ịdabere na ya na ọrụ na ea
Ọkpụkpọ hydraulic, Carbon enweghị nkebi Pipe, Ọkụ St52 enweghị nkebi, Na 179 enweghị nkebi tube, Ọkụ na-ekpo ọkụ Rolled Seamless Steel Pipe, Carbon Steel enweghị nkebi,